isiRashiya is ukuba igeza ocebile futhi kunalokho hlestok ezaziwayo. Njalo izwi kuwo inenani ezithile, umqondo yenethiwekhi, ngezinye izikhathi kabili, kodwa namanje. Kusukela ezikhathini imperial emagama angaphandle kancane kancane waqala ukungena ukusetshenziswa, okuyizinto Russified noma noma ayizange ithuthuke.
Ngokwesibonelo, igama elithi "amasosha" beza kithi evela e-Italiya. Esikhathini ezweni of yizilwi, kweColosseum futhi pasta kangaka okuthiwa amasosha mercenary, okuyinto babekhokha imali ngomsebenzi wabo, okungukuthi zemali ezazisemizini inkambo isikhathi. Lezi zinhlamvu babizwa ngokuthi "soldi". Futhi ke akuve ilula: igama waboleka ngokunikeza ekupheleni futhi sifika umngani bonke ngothi lwabo "amasosha" nge incazelo esobala.
Esinye isibonelo singenelwe isichazamazwi yethu yamazwi angaphandle - it is bonke "smartphone" yesimanje ezaziwayo. "Smart" lihunyushwa lisuselwa isiNgisi njengolimi smart phone kanye Image ke ifoni. It kuvela ukuthi zonke izakhamuzi yesibili yale planethi, umnikazi wesikhwama wajabula kakhulu smart phone.
Uhlu amazwi imalimboleko ngezilimi ezahlukene emhlabeni kuyanda njalo ngonyaka. Abantu abasha kufanele injabulo emangalisayo ngokuhlangana lezi zinto, futhi zenza abantu abadala ukuze silondoloze esikhona manje, sihambisane izikhathi futhi uhlale lo mkhuba. Namuhla, thina sinake abeza Russia hhayi kangako kudala, igama elithi "Ukuphahlazeka". Uyini ngokuvumelana sonorous izindlela futhi lapho kufanele khona kangcono ukusebenzisa elithi newfangled? Nokho, asihambe!
Igama elithi "Ukuphahlazeka" waqhumuka wakhala isichazamazwi yethu ngolimi lwesiNgisi, futhi uhlala ingashintshiwe ngokuphelele: akazange engeza ekupheleni, musa usike, kodwa esasetshenziswa njengoba injalo, ngaphandle wokuhumusha. Nakuba isiNgisi ukubaluleka ukuphahlazeka - ukuphahlazeka, ukuphahlazeka, ukuphahlazeka, kodwa kudingeka yisikhonyane e ulimi angalwazi, kungenjalo izwi uzolahlekelwa incomprehensibility yayo magic.
Kunengqondo ukuphetha ngokuthi yonke into ilula: Ngezwa eside engasho lutho, futhi ngokushesha waqaphela ukuthi bekuyingelosi kwanoma iyiphi inkathazo ngesimo ukuwohloka noma ingozi, uma kuziwa kwezobuchwepheshe noma izimoto. Kodwa akuyona yonke into uyabikelwa njengoba kwakubonakala efika kuqala. Ngakho-ke yini ukuphahlazeka: ukusetshenziswa kwamagama.
Lapho ezwa ngaleso abashayeli nabalandeli mayelana omagazini amasu
Zilungele abangakwazi abanikazi izimoto izithuthuthu, ibinzana ukuphahlazeka test alulusha. Kuyinto Adalberto isikhathi eside ukuba singangeni ngenkani Amakhasi abezindaba obuhambisana ahlobene nezinhlelo zethelevishini mayelana nezimoto, futhi, avame ukusetshenziswa.
Futhi iyini ukuhlolwa yokuphahlazeka? Uma ahumushe isiNgisi, nezwi leli gama lisho zwi - test eziphuthumayo. Abaningi bukhoma imidlalo ye-TV novivinyo olunjalo kwenziwe nge izimoto. Eyayenziwe kabusha isimo engozini yemoto, bese uhlole umphumela zokuhlola: ukulimala umshini, isimo umgibeli kanye nomshayeli. Lolu vivinyo okuhloswe ngayo ukwenza ngcono ikhwalithi ukuphepha ezimotweni nganxanye yokuthi ubuka izithombe sokonakala-test njalo umshayeli wacabanga mayelana nokuziphatha zabo endleleni.
Phahlaza-amantombazane: ukubaluleka ethandwa umusho intsha
Mhlawumbe lo mqondo livela edume kakhulu futhi isiyatholakala kumanethiwekhi eminingi yomphakathi. Lapha, funda, ukuxhumana futhi ngenze abangane, izigidi zabantu ezivela emhlabeni wonke. Phahlaza-amantombazane - into isifiso, ngamanye amazwi, intombazane ziyahlanya othandweni. Nokho, By endleleni, izwi ingasetshenziswa maqondana nsizwa, kuyodingeka wenze ngaphandle Girl ekupheleni inhlanganisela.
Izincwadi phakathi intsha ingabhekana frazochki, ezifana: "Angikwazi ukulala, ngoba nje iphahlazeke engqondweni yami." Noma nezindaba plan onjalo: "? Kuyiqiniso ukuthi Oles ukuphahlazeka yakho" Ngakho-ke, impendulo yombuzo othi lokho okushiwo iphahlazeke, angabhekwa: uthando zokuphila kwakho.
Kulabo ukusebenzisa ukudla
Kungase kuzwakale kuxakile, kodwa kukhona into okuthiwa Ukudla ukuphahlazeka. Kuhloswe kulabo bayakwazi ucwaningo abangenangqondo ngomzimba wakhe kanye nezempilo. Lena ngempela ukudla engajwayelekile, okuyinto yakhelwe onohlonze ukwehla nsuku caloric isibalo sabahlengikazi abaqeqeshwayo futhi Ukuyekwa kwezindlela imikhiqizo eminengi enomsebenzi omuhle kanye supply edingekayo izakhamzimba. Kulokhu, lo Igama lesiNgisi elisho "Ukuphahlazeka" Inani - kuba ingozi, lapho isetshenziswa lapho uya khona. Caveat kuphela - akufanele unamathele indlela yokudla ehambisana nempilo esiyingozi ezingase zibe yingozi empilweni.
Onekareko okuthile ke itiye elishisayo?
Eminyakeni yamuva, ukuba ngqo, ngemva kwalokho iphutha okubizwa ngokuthi ubulili nokuziphatha ngendlela ehlukile, kunemibandela eziningi ezihlobene izihloko ezifana obuseduze. Phakathi baphendukele ibinzana wayichoboza kwesithixo okhombisa uhlobo inkanuko yobulili, ivela emehlweni ukuchotshozwa izinto, ukudla, izidalwa ezincane eziphilayo (izinambuzane noma iminenke). By the way, unya kuzilwane Kulicala hhayi kuphela e-United States, lapho imilenze zikhule futhi lokhu ukuzijabulisa ongaziwa ngokobulili, kodwa futhi kwamanye amazwe amaningi emhlabeni wonke.
Igama elithi "Ukuphahlazeka" akazange indiva nezwe computer. Kulokhu, leli gama lisetshenziswa ngokunganaki inhloso yazo futhi kuyavumelana ngokuphelele nalo wokuhumusha. Okusho ukuthi, lapho ezwa, isibonelo, inkulumo ethi "uhlelo ngalimala ukuphahlazeka," uyazi ukuthi sikhuluma wokugoqa wesistimu yokusebenza sekhompyutha.
Okunye nenshokutsi izwi
Siyini "Ukuphahlazeka" kanye amanani amaningi eziyisisekelo emagama labolekiwe? Konke lokhu kwaba kuxoxwa, kodwa kubalulekile ukuba ukhulume amabili nezinye izindawo kwezicelo yayo:
Crush syndrome. Leli gama lisetshenziswa umuthi ukushaqeka anobuthi in iziguli ukwehluleka kwezinso, okuvame eba kokucindezelwa kwesikhathi eside izicubu zomzimba ezithambile.
Futhi izwi ukuphahlazeka abayimilutha zisebenzisa njengoba isimo isitsotsi isiqu ezihambisana nokuqaleka, oza emva ukusetshenziswa isikhathi eside izidakamizwa, ukucindezeleka kwengqondo, ukukhathazeka, ukungabi nalutho. Ngokuvamile, ukuwohloka ngokuphelele. Esidala indlela usuphelelwe yisimo ngokuthi "break-up".
Kuyaphawuleka ukuthi eziningi amazwi beqhumuka ezimpilweni zethu ngokushesha ukuze asinawo isikhathi qaphelani, njengoba siwasebenzisa, ufaka ku iziphakamiso ukuqokwa futhi unencazelo enenjongo. Abanye musa ukuhlala isikhathi eside, ayisheshi ukulibaleka futhi ahlale kuphela zidlulile. Kazi eside eziyoba khona Russian ulimi izwi ethandwa entsheni "Ukuphahlazeka"?
National Park "Paanajarvi" Karelia: incazelo, izivakashi kanye amaqiniso athakazelisayo
Museum of Umculo futhi Performing Arts: incazelo, umlando, izici, imibukiso kanye nokubuyekeza
Dmitriev-Lgovskii - idolobha elincane elinomlando omude
Hypothyroidism: izimpawu kanye nokwelashwa
U-Grigory Anikeev: isithombe, biography, umndeni, oxhumana nabo
Inani labantu base-Earth, noma ukushabalala lo owayephila mammoth
Labor Day ngaphandle ezombusazwe
Tatiana Mikhalkov: Biography futhi ukuphila siqu (izithombe)
Ngobukhulu namandla ezishisayo isitshalo waseRussia - ugesi yesiqinisekiso ikhaya
Solomon Haykin - isipoki inthanethi
'Vitaon' ngesikhathi abandayo
Ukuguga ngaphambi kwesikhathi umzanyana: izimbangela, nemiphumela nezindlela zokwelashwa
Uthando ngesikhathi sokuzalwa komuntu 2014: bezinkanyezi ukweluleka